हप्ता हंगामा - १ लाखमा गाडी
छापामारलाई डिग्री बाँड्ने विश्वविद्यालय खोल्ने रे !
किन गएछन सभासद मसाजपार्लर ?
हो त, अब एक लाखमा गाडी किन्न पाइने भएको छ। भारू १ लाख याने अमेरीकी डलर २५०० मात्र । यो नेपालको बजारमा पनि देखिन सक्छ। सुरक्षाको कारणले अन्य देशमा भने यस्ले ठाउं पाउने छैन। २ सिलिन्डर इन्जिन भएको Tata Nano गाडी यही मार्चबाट बजारमा बिक्री बितरण हुने भएको छ। आउन त पहिलै नै आउनु पर्ने हो तर गाडी बनाउने कारखानाले किसानलाइ गतिलो मुआब्जा नदिएको कारण बिरोध मात्रै भएन टाटाले कारखाना नै सार्नु परेको थियो।
यो गाडीको सुरक्षा प्रबिधी एकदमै कमजोर मात्रै होइन कि छँदै छैन भने पनि हुन्छ। एन्टी लक ब्रेक त छैन छैन, एयर ब्याग पनि यसमा छैन। पछाडीको सिट मुनी इन्जिन भएको यो गाडीमा अगाडीको पांग्रा फित्ताले गुडाउंछ। हेर्दा यो चार पांग्रे गाडी भए पनि यस्लाइ छत भएको मोटर साइकल भने फरक नपर्ला। साना साना २ जना अगाडी बस्न मिल्ने यो गाडीमा अगाडीको सिटमा भने सिट बेल्ट छ। तर यस्मा पावर स्टेरिगं,पावर झ्याल जस्ता प्रबिधीको नामो निसानो छैन।
यो फुच्चै गाडी टाटाले महिनामै १५०० गाडी बनाउन सक्छ रे। दिनमै १५०० नया गाडी थपिने भारतमा यस्ले कतीको जाम थप्ने हो? भनिन्छ काठमान्डोमा गाडी लाइन लगाए बाटो भन्दा गाडीको लाइन लामो हुन्छ रे। भने पछि यो गाडी नेपाल भित्रीए गाडीको लाइन पक्कै थानकोट कट्छ। मारुती गाडीले टेम्पोको संकट निम्ताए अब भने खैनीको बट्टा भन्दा अली ठुला यि गाडीले ढोका थर्केने मारूतीलाइ साढे सात निम्ताउने निकै भय छ।
सर्वहारा प्रधानमन्त्रीले १ करोड गाडी र २ लाखको पलंग चढे भन्ने मुलुकाँ हल्ला चलेको छ , माओवादीले यो समाचार थाहा पाए भने यही चढ्न पो प्रधानमन्त्रीलाई भन्थे कि !
आब्बुई ! यस्तो कम्जोर गाडी नेपाल मा नभित्रिए हुन्थियो । एक त हाम्रो मा बाटो घाटो सधैं नै कच्ची जस्ताइ हुन्छ झन त्यस माथि यस् किसिमका टि न का पाता ले बनेको खेलौना जस्तो गाडी नेपाल मा थुप्रिएर अब कत्ती बातावरण लाई हानी गर्ने हो !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
रकम अत्यन्तै न्युन रहेछ क्बालिटी जस्ताइ । हामीमा बातावरण सम्बन्धी चेत आ ई सकेको छैन पूर्ण रुपले । चेत आएका पनि कुन्ड कुन्ड पानी मुन्ड मुन्ड बुद्दी भने जस्ताइ छन । ( सबै त होइन तर पनि धेरै नै चै हो )
धेरै ले यो गाडी खरिद गर्लान रिण नै काढेर पनि , किनकी भौतिक सामाग्री मा लगाब छ हामी नेपाली मा । झन सस्तो गाडी पाए पछी के चाहियो र !
यस् किसिमका चिप क्बालिटिका गाडी निम्न बर्ग र मध्यम बर्ग लाई ध्यान मा राखेर बनाएको जस्तो लाग्यो । अब त्यस्को बजार नेपाल मा मजाले हुन्छ ।
कामना गरौ नेपाल सरकार ले दुर दृष्‍टिकोण राखेर त्यस किसिमका सबारी साधन लाई नेपाल भित्र्याउने काम नगरोस !
नेपालीयन जि लाई धन्यवाद समाचार को लागि ।
लुना जि ले भने जस्तै, यस्ता किसिमका अत्यन्तै कमजोर प्रबिधी बाट बनेका गाडीहरुले वाताबरणिय असर त पुराउछ नै त्यसभन्दा बढि जोखिम पूर्ण दुर्घटनाहरु अझ बढी मात्रमा बढाउने खतरा छँदै छ । पक्कै पनि यो मध्यम बर्गिय नेपाली समाजको पहुच भित्र पर्ने भएकाले यदि यो गाडी नेपाल भितृयो भने ऋण काढेर भएपनि किन्न तछाड मछाड हुने नै छ । त्यसैले नेपाल सरकारले यि बिषयमा पहिलेनै सतर्कता अपनाएर नेपाल र नेपालीको हितमा हुने कदम मात्र अवलम्बन् गरोस्।
एक लाख रुप्पे चैं बाँसका झ्याङाँ फल्छ कि क्या हो ? यस्तो फट्याङ्रे गाडी म त किन्दिन । कज वेमा उत्तानो बल्ड्याङ खाएर स्वोर्गे जानु छैन ।
- Gole Dai